WASHINGTON - Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Jimcihii inay xayiraad saartay 3 qof iyo Shirkado ay leeyihiin oo xaruumahooda ku yaallaan Philippine, Turkey iyo Soomaaliya, kuwaasi oo ay ku eedeedaysay inay taageeraan Daacish.
Ganacsatada cunqabateyn lagu soo rogay waxaa kamid ah Maxamed Mire Cali Yuusuf oo loo yaqaano "Soo dareeri" iyo shirkado uu leeyahay oo lagu kala magacaabo Liibaan Trading iyo Al Mutafaq.
Ninkan oo fadhigiisa yahay Puntland iyo magaalada Dubai ayaa waxay dowladda Mareykanka ku eedaysay inuu taageero Kooxda katirsan Daacish ee ka dagaalanta gobolka Bari.
Ganacsade Maxamed Mire waxa uu leeyahay Doomo Shixnadaha Ganacsiga isaga kala gudbiya dalalka Soomaaliya, Yemen iyo Imaaraadka Carabta, waxaana Mareykanka uu leeyahay wuxuu taageeraa Daacish.
Cunaqabateyntan waxaa lagu shaaciyay qoraal kasoo baxay Waaxda lacagta Mareykanka [Wasaaradda Maaliyadda], balse laguma sheegin nooca ay noqonayso, laakiin waxay u muuqataa in la xayirayo dhaqaalaha Ganacsadahan u yaalla Bangiyada caalamka.
Ganacsade Maxamed Mire ayaa beeniyay eedeynta Mareykanka isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inuu la fariisto cid kasta si uu ugala hadlo xayiraada la saaray.
Warbixin UN Monitering Group ay soo saartey bishii November, 2017 ayaa ku eedaysay Ganacsade Maxamed Mire inuu xiriir la leeyahay Daacish, islamarkaana hubka ugu geeyo saldhigyada ay ku leeyihiin gobolka Bari. Halkan ka akhri.
Mareykanka oo ka hadlay Khasaaraha Duqeymaha Soomaaliya
Soomaliya 14.11.2017. 14:42
Cawad oo su'aallo laga waydiiyey qaraxii lala xiriiray Qadar
Soomaliya 28.07.2019. 17:33